June 2019 – Sonic Generation
အသက် (၆၅) နှစ်မှ ဘဝအသစ် စသူတစ်ယောက်အကြောင်း
တစ်ခါက အိမ်သေးသေးလေးမှာ နေရရှာတဲ့ အဘိုးကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူ့မှာ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းပိုင်တာဆိုလို့ ကားစုတ်လေးတစ်စီးပဲ ရှိရှာတယ်။ အစိုးရထောက်ပံံ့ကြေးနဲ့ သူ့စားဝတ်နေရေးကို ဖြေရှင်းနေရှာပါတယ်။ သူ့အသက် ၆၅ နှစ်မှာတော့ သူ့ဘဝကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သူဘာတွေ လုပ်နိုင်လဲလို့ သူစဉ်းစားတယ်။ သူ့ရဲ့ ကြက်သားကြော်တွေ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေ မကြာခဏ ချီးမွမ်းတာကို သွားသတိရတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကြက်သားကြော်နည်းပညာက သူ့ဘဝကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အရာလို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။—အေသးစိပ္ ဖတ္ရႈ႕လိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္—
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်းများစွာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့သူ တရုတ်သူဌေးကြီး ဂျက်မ အကြောင်း
ဂျက်မ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ????
သူပာာ နာမည်ကျော် အလီဘာဘာကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်သူဖြစ်တယ်။ တရုတ်ပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး သူဌေးတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၃၉ ဘီလျံကျော် ချမ်းသာပါတယ်။—အေသးစိပ္ ဖတ္ရႈ႕လိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္—
USD Index (Daily Chart)
TP2 ဆီသို႔…… ေရာက္ခါနီးေနပါၿပီ….
Forex & Gold Trading (Basic++ Course)
Forex & Gold Trading Basic++ Course (Ygn)
Basic++ Course (Ygn)
အောင်မြင်သူတွေ ဘယ်လို အလုပ်ကြိုးစားကြလဲ
တရုတ်ဘီလျံနာသူဌေးကြီး ဂျက်မား ပြောဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် အငြင်းအခုံများစွာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီစကားပြောခဲ့တာ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး။—အေသးစိပ္ ဖတ္ရႈ႕လိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္—
အောင်မြင်ဖို့အတွက် “7 P”
ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ “7 P” ကို ဖတ်ကြည့်ပါဦး။—အေသးစိပ္ ဖတ္ရႈ႕လိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္—
ကိုးစားမှုတိုင်းက အောင်မြင်ဖို့ ဆိုရင်…..
အလုပ်တော့ ကြိုးစားတာပဲ မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာဘူး။
လုပ်တော့ လုပ်နေတာပဲ။ မတိုးတက်လာဘူး ဖြစ်ဖူးကြလား —အေသးစိပ္ ဖတ္ရႈ႕လိုပါက ေခါင္းစဥ္ကို ႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္ပါသည္—
Total Website Visits: 306587